Daawo Sawirro: Saraakiil Sar Sare oo Booqday dugsiga tababarka ee Generaal Kaahiye oo tababar ugu socdo Ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliyeed – Kismaayo24 News Agency
by admin 13th May 2016 012
Taliyaasha ciidamada Asluubta, Badda iyo Cirka ayaa maanta booqdey dugsiga tababarka ee Generaal Kaahiye oo tababar ugu socdo ciidamo ka tirsan booliska waxaana gudaha dugsiga tababarka Generaal Kaahiye kusoo dhaweeyay Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidanka booliska.
Kooxda fanaaniita ciidanka booliska ee heegaan ayaa goobta kusoo bandhigey sugaan ka turjumeysa sidii ay iskula shaqeyn lahayeen ciidamada qalabka sida.
Taliyaha Ciidanka Cirka Sareeyo guudto Maxamuud sh Ali dable baylood oo ku hadlayay magaca taliyaha ciidanka Xoogga dalka ayaa sheegey in ciidanka booliska Soomaaliya uu yahay hooyada dalka isla markaana ku tilaabsaday horumar la taaban karo ay ciidamada booliska ay gaareen.
‘’Anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidamada xoogga Dalka Soomaaliya S/Gaas Maxamed Aadan Ahmed waxaa halkaan ka cadeeynayaa in ciidanka Booliska soomaaliya uu gaarey horumar weyn madaamada ciidamada booliska soomaaliya ay soo mareen mar Xalaado kala duwan balse ay hada kasoo kabsadeen ‘’ayuu Yiri Gen Bayloote.
S/Gaas Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe Taliyaha ciidanka Asluubta ayaa waxaa uu u balan qaadey ciidamada tababarka ugu socdo dugsiga Generaal kaahiye inoo keeni doono ku dhawaad Boqol kori oo ah kuwa lagu tababaro ciidamada iyo Kuraas iyo miisas wax lagu baro ciidamada dhibowga ku jira.
‘’Taliska Ciidanka Asluubta waxa ay soo saaraan qoryaha lagu tababaro ciidamada waxaan ku deeqeynaa dugsiga tababarka general kaahiye oo ay kasocdaan tababaro kala duwan waxaan ku deeqeynaa qoryo lagu tababaro iyo miisas kuraas ah oo wax lagu baro’’ayuu yiri Gen Bashiir.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya S/Gaas Maxamed Sh Xasan Xaamuud waxa uu sheegey taliska ciidanka booliska Soomaaliya uu wado dadaalo lagu hormarinayo Aqoonta iyo tababarada ciidanka booliska isagoona sheegey in ay kor dhiyeen siminaarada iyo tabarada ciidanka booliska soomaaliya.
‘’Waxaan Wadnaa dadaalo aan ku hor marineyno tayeenta iyo aqoonta ciidamada booliska soomaaliya waxaana rajeyneynaa in aan gaarsiino booliska caalamka sida ay u shaqeyaan waxaa tababar kala duwan u qabaney saraakiilsha dableyda ciidanka booliska soomaaliya”.ayuu yiri Gen Xaamud.
waa markii ugu horeysey oo ay ka qeyb galaan sareeyaal ka tirsan ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyo Asluubta kulan kaas oo ahaa mid lagu dhiiragaliyo todobaad walba.
Faah Faahin: Qaraxyo Waaweyn oo lagu Xiray laba Ceel Biyood oo ku yaala Dagmada Aadan yabaal ayaa Maqribnimadii Caawa laga…
WAR CUSUB: Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka dib ugu soo laabtey, kadib markii uu ka soo qeybgaley Caleema saarka Madaxweynaha Uganda+Sawirro
Update: Dableey hubeysan oo gudaha u galay hotel caan ah oo Boosaaso ku yaala iyo qasaaraha oo sii kordhaya
Tifaftiraha K24 17th January 2016
Xarakada Al Shabaab Oo Gaaray Deegaano Ka Tirsan Gobolka Mudug.
admin 24th November 2017